Chemometrics အခန်း ၁/၂- ကြီးကြပ်မထားသော နည်းလမ်းများ
နမူနာတစ်ခု၏ ဓာတုဗေဒပါဝင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ မထိဘဲ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ခန့်မှန်းနိုင်ပါသလား။ ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ကိုဖော်ထုတ်? ဟုတ်တယ် ! နမူနာရောင်စဉ်တစ်ခုရယူခြင်းနှင့် ဓာတုဗေဒကိရိယာများဖြင့် ၎င်း၏ကုသမှုကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းသည် ဖြစ်နိုင်သည်။
Chemoocs သည် သင့်အား ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှုများတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအရာက သိပ်သည်းတယ်။ ထို့ကြောင့် Mooc ကို အခန်းနှစ်ခန်းခွဲထားသည်။
ဤအခန်းတွင် ကြီးကြပ်မထားသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆွေးနွေးထားသည်။ အပေါ်က Teaser က သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
FUN တွင် သင်ပြန်လည်စာရင်းသွင်းရမည့် ဒုတိယအခန်းတွင် ကြီးကြပ်မှုနည်းလမ်းများနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနည်းလမ်းများ၏ တရားဝင်မှုကို ဆွေးနွေးထားသည်။
Chemoocs သည် အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံး အစီအစဥ်များအနီးတွင် ပျံ့နှံ့မှုအရှိဆုံးဆီသို့ ဦးတည်သည်။ သို့သော်၊ ဓာတုဗေဒပညာကို အခြားရောင်စဉ်တန်းဒိုမိန်းများ- အနီအောက်ရောင်ခြည်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ မြင်နိုင်၊ မီးချောင်း သို့မဟုတ် ရာမန်အပြင် အခြားသော ရောင်စဉ်တန်းမဟုတ်သော အပလီကေးရှင်းများစွာအတွက် ဖွင့်ထားသည်။ ဒါဆို မင်းရဲ့ နယ်ပယ်မှာ ဘာလို့ မလုပ်တာလဲ။
ChemFlow ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြု၍ ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် စမတ်ဖုန်းမှ ရိုးရှင်းသောအင်တာနက်ဘရောက်ဆာမှတစ်ဆင့် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာလေ့ကျင့်ခန်းများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သင်သည် သင်၏အသိပညာကို အသုံးချမည်ဖြစ်သည်။ ChemFlow ကို တတ်နိုင်သမျှ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး အလိုလိုသိနိုင်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပရိုဂရမ်းမင်း ဗဟုသုတ မလိုအပ်ပါ။
Chemometrics အခန်း ၁/၂- ကြီးကြပ်မထားသော နည်းလမ်းများ ဒီဇင်ဘာလ 19, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် အခမဲ့ - Zoho Sign ဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်တီးပါ
လွန်ခဲ့သောကွမ်တမ်ရူပဗေဒ နိဒါန်း- အပိုင်း ၁
အောက်ပါဓာတုဗေဒဘာသာရပ်၊ အခန်း ၂/၂- ကြီးကြပ်မှုနည်းလမ်းများ
အင်တာနက်ပေါ်တွင်ငွေရှာရန်နည်းလမ်း (၁၀) ခုရှာဖွေပါ